Waa in la helo caasimad cusub oo matali karta ummada Somaliyeed - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Waa in la helo caasimad cusub oo matali karta ummada Somaliyeed
Somaliya si deg dega ha uga tashato sidii ay u heli lahayd caasimad matali karta. Xamar markii laga dhigayay caasimada, dadka degan waxay ahaayeen boqolkiiba boqol dad isku dhafan. Hadda burburka kadib oo nin walba dib ugu noqday deegaanka jufadiisa u badan tahay, waxa si weyn hoos ugu dhacay maamuskii magaaladu ay ku lahayd ummada dhexdeeda.
Xataa haddii ay ilaawaan bililiqadii qaranka ay u gaysteen mooryaantii USC ee Cali Mahdi iyo Caydiid iyo kuwii ka dambeeyay oo magaalada u kala goostey xaafad xaafad iyo luuq luuq, ayagoo ku dhex dagaalamaya hantidii qaranka iyo guryihii ummada. Xamar burburka kadib waxa u badnaatey hal jufo maadaama ay ka soo guureen deegaanadii ku teedsanaa magaalada samaysteena xaafado cusub.
Maanta hadaad booqato Xamar waxaad ku noqonaysaa qariib halka 1991 kahor ay aad uga buuxeen jufadaada ama ay juireen xaafado lagu tilmaami jirey waa xaafad reer Woqooyi ama xaafad reer Bari. Jaarkaagu wuxuu ahaa nin ka yimi gobolada ama waxaad ku lahayd saaxiibo aad isku dugsi ahaydeen oo kala jaada.
Burburka kadib waxaas ma jiraan sidaan aragneyna tani waxay halis ku noqotey qaranka iyo dib u heshiisiinta iyo dawladnimada qaasatan maalmihii u dambeeyay oo dagaal oogeyaal Hawiye ah ay bilaabeen inay magaalada qasaan hadaan la yeelin sidey rabaan. Tani waa cusub oo u baryay cidkasta oo madaxweyne ka noqota dalka oo aan ka soo jeedin Hawiye fadhina u yahay magaaladaas ahaan jirtey caasimadii qaranka.
Sidan dawlad laguma noqon karo, ayadoo dawladu awood u leh inay cagta mariso maleeshiyada qabailka ku dhisan oo ay u yeerteen dagaal oogeyaashaa sheegan jirey musharixiinta, waxayse taas uga baaqsanaysaa in kooxda ku awrkacsanaysa ay aasd u yaryihiin halka dadka waxyeelada ay ka soo gaaraysaana ay badan yihiin.
Marka aad isku miisaanto labadaa waxa kuu soo baxaya in si degdega loogu baahan yahay in dhiso caasimad lawada degan yahay oo qabiil kasta ka degan yahay qayb si aan loo helin magaalo hal jufo ku badan tahay ayna qasi karto magaalada inteeda kale, inta la helayo ciidan ka nadiifa qabiil.
”Hadayna hadda imaan waxaa qasaba iney imaan doonto waayo waxaan kuu hubaa awal guryo rasaas ku dhacday ayaan ka hadlaynay ee waxa imaan doonta maalin la waayo Xamar oo guri ka taagan yahay ayuu yiri Cali Calasow oo isagu degan Xamar.
Caasimad la wada leeyahay waxay abuuraysaa deganaansho waayo dagaal ooge hal jufo ah ma wada qixin karo bulshada dhan aan ka ahayn jufadiisa, wayna fududaanaysaa in la yareeyo dhaawaca soo gaaraya qaranka waayo jufo xun qaran uma babac dhigI karto dhaqsana waa loo soo afjari.